GNOMEApps3: Ngwa mmepe obodo GNOME | Site na Linux
GNOMEApps3: Ngwa mmepe obodo GNOME
Linux Post Wụnye | 27/09/2021 06:00 | Aplicaciones, GNU / Linux
Taa, anyị ga -ewetara ma mechaa nke anyị usoro nke ihe 3 banyere "Ngwa GNOME Community". Mbipụta nke taa bụ nke kwekọrọ na nke atọ "(GNOMENgwa 3) » metụtara Ngwa Mmepe.
Iji mee nke a, mechie nyocha nke katalọgụ sara mbara na -eto eto nke ngwa efu na nke mepere emepe nke ndị "Obodo GNOME", na webụsaịtị ọhụrụ ya Ngwa maka GNOME. N'ụzọ dị otu a, ịkwalite ihe ọmụma gbasara ha nye ndị ọrụ niile n'ozuzu ha GNU / Linux, ọkachasị ndị nwere ike ha anaghị eji "GNOME» dị ka «Desktọpụ Environment» isi ma ọ bụ naanị.
GNOMEApps1: Ngwa GNOME Community Core
Maka ndị nwere mmasị inyocha 2 anyị gara aga mbipụta ndị metụtara isiokwu ahụ na ndị ọzọ yiri ya, ị nwere ike pịa njikọ ndị a ka ị gụchara akwụkwọ a:
GNOME CIRCLE: Ngwa na ulo akwukwo ulo akwukwo maka GNOME
Na maka ozi ndị ọzọ pịa na Ngwa emepụtara site na «Obodo KDE» na «Obodo XFCE».
1 GNOMEApps3: Ngwa Mmepe
1.1 Ngwa Mmepe - Ngwa na -enyere aka itolite GNOME gburugburu ebe obibi
1.1.1 Ngwa nlele akara ngosi
1.1.2 Ọbá akwụkwọ
1.1.6 Onye editọ dconf
1.1.7 Palette ụcha
1.1.9 Nlele nlele
GNOMEApps3: Ngwa Mmepe
Ngwa Mmepe - Ngwa na -enyere aka itolite GNOME gburugburu ebe obibi
Na mpaghara a Ngwa Mmepe, na "Obodo GNOME" amalitela n'ihu ọha Ngwa 09 nke anyị ga -ekwu maka ya na ikwu maka ha niile:
Ngwa nlele akara ngosi
Ọ bụ ngwaọrụ iji chepụta akara ngosi ngwa maka desktọọpụ GNOME. Ngwa ngwanrọ a dị ugbu a na ụdị 2.1.2 yana mmelite ikpeazụ edebanyere aha ya bụ na 27/03/2021. Ọ bụ mepụtara ya Bilal Elmoussaoui na Zander Brown n'okpuru ikike GPL-3.0.
Ọ bụ ngwa sọftụwia na -enye ngwugwu akara ngosi ihe atụ maka ngwa. N'ụzọ dị otu a, enwere ike ịchọta akara ngosi ziri ezi iji ya na ngwa GNOME ọ bụla. E bipụtara ụdị ọhụrụ ya 0.0.8 na Mee 4, 2021.
Ọ bụ gburugburu Integrated Development Environment (IDE) jisiri ike maka GNOME. Ọ na-ejikọta nkwado wuru maka teknụzụ GNOME dị mkpa, dị ka GTK +, GLib, na GNOME API nwere atụmatụ nke onye nrụpụta ọ bụla ga-enwe ekele, dị ka ịkọwapụta snix na snippets. E wepụtara ụdị ọhụrụ ya 40.2 na Mee 5, 2021.
Ọ bụ ngwa sọftụwia na -enye gị ohere inyocha ọdịiche dị n'etiti agba abụọ. Nke ahụ bụ, ọ na -enyocha ọdịiche dị iche n'etiti agba abụọ na -emezu ihe WCAG chọrọ. E bipụtara ụdị ọhụrụ ya 0.0.3 na Febụwarị 22, 2020.
Ọ bụ ngwa nrụpụta maka ịgagharị na ịchọ akwụkwọ API. Na -enye ụzọ dị mfe iji chọgharịa ọba akwụkwọ wee chọọ site na ọrụ, usoro, ma ọ bụ nnukwu. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na GTK-Doc, yabụ a na-akwado ọba akwụkwọ GTK na GNOME. E bipụtara ụdị ọhụrụ ya 40.1 na Ọgọst 26, 2021.
Onye editọ dconf
Ọ bụ ngwaọrụ na -enye gị ohere idezi nchekwa data nhazi ozugbo. Nke a bara uru mgbe ị na -emepe ngwa na -eji ntọala ndị a. Jiri ya na -elezi anya ka ntọala idezi bụ ihe dị elu nke nwere ike ibute ngwa. E wepụtara ụdị ọhụrụ ya 3.38.3 na Machị 23, 2021.
Ọ bụ ngwa maka ilele palette agba GNOME, dị ka akọwara na ntuziaka imewe. E bipụtara ụdị ọhụrụ ya 2.0.0 na Mee 29, 2021. Ọ bụ mepụtara ya Zander Brown n'okpuru ikike GPL-3.0.
Ọ bụ ngwa sọftụwia na -enye gị ohere ịkọwapụta ngwa iji nyere aka na nbipu na njikarịcha. Site na profaịlụ, ọ na -ezo aka na -enyere gị aka ịchọta ọrụ nke mmemme na -eji oge ka ukwuu. E wepụtara ụdị ọhụrụ ya 3.42.0 na Septemba 21, 2021.
Ọ bụ ngwa na -enyere aka ịmepụta, hụchalụ na mbupụ akara ngosi. E bipụtara ụdị ọhụrụ ya 0.0.2 na Eprel 15, 2021. Ọ bụ mepụtara ya Bilal Elmoussaoui n'okpuru ikikere GPL-3.0.
Na mkpokọta, anyị na -achọ nke a ndezigharị nke atọ na nke ikpeazụ "(GnomeApps3)" nke ngwa ukara dị adị nke "Obodo GNOME", nke na -agwa ndị nọ n'ọhịa Ngwa Mmepe bụrụ ihe na -atọ ụtọ ma na -eje ozi ịkpọsa ma tinye ụfọdụ n'ime ndị a n'ọrụ ngwa ọdịnala banyere dị iche iche GNU / Linux nkesa. Yabụ na anyị na -atụnye ụtụ n'iji oke na ike dị egwu ngwanrọ software lee ka o si maa mma ma na -arụsi ọrụ ike Obodo Linuxera na -enye anyị niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » GNOMEApps3: Ngwa mmepe obodo GNOME
Firezone, nhọrọ kachasị mma iji mepụta VPN dabere na WireGuard
Kali Linux 2021.3 ji ngwa ọhụrụ na ụdị NetHunter maka TicWatch Pro bịarute